Soomaaliya Iyo Qadar Oo Xoojinaya Iskaashiga Labada Dal – Banaadir weyne
Soomaaliya Iyo Qadar Oo Xoojinaya Iskaashiga Labada Dal
26 Oktoobar, 2018
Muqdisho (SMN) – Wasiirka Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa la kulmay Danjiraha dowladda Qadar u fadhiya Muqdisho, Hassan Bin Hamza Asad Mohammed Hashim.
Kulanka labadda masuul oo qaatay saacado ayaa wuxuu ka qabsoomay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah ay ku leedahay magaaladda caasimada ah ee Muqdisho.
Wasiir Cawad iyo Safiir Hassan ayaa isla soo qaaday arrimo badan oo ku saabsan xiriirka labadda dowladood ee walaalaha ah, iskaashiga la xiriira dhinac kasta iyo sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka dal.
Qoraal koobay oo lasoo dhigay barta rasmiga ah oo ay Twitter-ka ku leedahay Wasaaradda ayaa lagu yiri: “Wasiirka Arrimaha Dibadda, wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka waddanka aynu walaalaha nahay ee Qadar. Intii lagu guda jiray kulanka, wada xaajoodka ayaa la isku weydaarsaday xiriirka labada dal.
Qadar ayaa safka hore waxay kaga jirtaa dalalka taageeradda dhinac kasta ah la garab taagan dowladda Soomaaliya, oo haatan wajahaysa caqabado kala duwan, balse ku dadaalaysa sidii ay uga soo kaban lahayd.